Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » British Airways: Marwooyin iyo marwooyin dambe ma jiraan
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka UK
Isbedelka ku yimid siyaasadda British Airways ayaa loo sameeyay si looga fogaado in la takooro rakaabka aan hoos imaan labada qaybood, sida carruurta, iyo sidoo kale “in la ixtiraamo caadooyinka cusub ee bulshada.”
British Airways waxay faraysaa duuliyayaasheeda inaysan mar dambe rakaabka diyaaradda ugu yeerin 'mudanayaal iyo marwooyin'.
Isbeddelka ku yimid siyaasadda British Airways ayaa lagu tilmaamay inuu yahay mid u taagan 'ka mid noqoshada iyo kala duwanaanshaha'.
Wali ma cadda sida loo salaamayo rakaabka British Airways halkii lagu soo dhaweyn lahaa 'mudanayaal iyo marwooyin'.
British Airways waxay noqotay diyaaraddii ugu dambaysay ee dhibbane u ah toosinta siyaasadda oo ku beddeshay salaanta qarnigii hore oo ay ku beddeshay beddel gibberish 'jinsi-dhexdhexaad ah'.
The UK maraakiibta calanka ayaa ku amartay duuliyayaasheeda in aysan mar dambe rakaabka ugu yeerin "mudanayaal iyo marwooyin", iyagoo taa beddelkeeda salaanta ka ilaalinaya jinsiga.
Isbeddelka siyaasadda ayaa lagu tilmaamaa inuu yahay mid u taagan "ka mid noqoshada iyo kala duwanaanshaha".
Isbedelka siyaasadda ayaa loo sameeyay si looga fogaado in la takooro rakaabka aan hoos imaan labada qaybood midkood, sida carruurta, iyo sidoo kale “in la ixtiraamo caadooyinka cusub ee bulshada.”
The British Airways afhayeenku wuxuu u muuqday inuu xaqiijinayo tallaabada loo qaaday “toosinta hadalka,” isagoo xusaya sida ay uga go’an tahay shirkadda “ka mid noqoshada iyo kala duwanaanshaha.”
"Waxaa naga go'an inaan hubinno in dhammaan macaamiisheena ay dareemaan soo dhaweyn marka ay nala safrayaan," ayuu yiri afhayeenka diyaaradda.
Ku dhawaaqistu si fiican ugama socon UK faallooyinka muxaafidka u janjeera. Qaarkood waxay gaadheen inay ku dhawaaqaan go'aanka qaaduhu siduu u tuuray weedha, oo muddo dheer loo arkayay inuu yahay cinwaan caadi ah oo edeb leh, "weerar" ku ah dabeecadda qaranka Ingiriiska.
Halka rakaabka fuushan a British Airways Duulimaadku mar dambe ma maqli doono “Mudanayaal iyo Marwooyin,” ma cadda sida dadka socdaalka hawada wax looga qaban doono si ay u sii socdaan, laakiin diyaaradda ayaa caadiyan “ku dhiirri -gelisay duuliyayaasheeda inay shakhsiyaadkooda u keenaan ogeysiisyada dusha.”
Ka-qaybgalayaasha IMEX America waxay u ordaan wanaagga
Alan Phipps wuxuu leeyahay,
Oktoobar 13, 2021 at 09: 59
Waan fahamsanahay rabitaanka ah in la wada yeesho laakiin ka waran dhaqanka iyo dhaqanka wanaagsan ee Ingiriiska? Markaa hadda waxaan maqli karnaa “Ku soo dhowow Safarrada Dadka ay ku jiraan Mudanayaal iyo Marwooyin, carruur iyo socotada LGBT oo leh qaybaha kale duwan ee bulshadeenna !! ”
Waa maxay culays aan macno lahayn !! Salaan dheer oo ka sarraysa kaptanka. Sidee guutadan WOKE u gaarto meel ay ka taliyaan isbeddelada noocaas ah? Maxaa ku dhacay Ingiriisnimadeenii?